Banyere Anyị - Higee Machinery (Shanghai) Co., Ltd.
HIGEE igwe nwere ihe karịrị afọ 15 nke ahụmịhe ọkachamara.
Igwe HIGEE na eme ihe na mmeputa nke ejuputa Capping na Labeling igwe di iche iche na ebe di iche iche karie na mmiri, ihe onunu na onunu. O doro anya na ị na-enyekwa igwe maka nri, ọgwụ, ihe ịchọ mma na ụlọ ọrụ kemịkal.
E zigara igwe anyị ihe karịrị mba 100 n'akụkụ ụwa niile. Anyị nwere uru iji mee ihe kachasị mma iji gboo ihe ndị ndị ahịa chọrọ chọrọ ma lekwasị anya na mma na ọrụ iji wulite ma jigide mmekọrịta azụmahịa ogologo oge na ndị ahịa ụwa.
Anyị nwere ezigbo ezigbo nzụlite na-arụ ọrụ na ndị ahịa si mba dị iche iche n'ọtụtụ ubi ọtụtụ afọ ma nye ọrụ gbatịrị agbatị. Anyị kwenyere na mmekọrịta anyị dị mma ga-eweta nsonaazụ dị egwu maka anyị abụọ.
Anyị etinyela ego ma kesara ụlọ ọrụ 6 na China. Imirikiti ndị ahịa nabatara kpọtụrụ anyị. Anyị ga-enwerịrị mmekọrịta dị mma na ndị ahịa site na ezigbo ọrụ na omume ọkachamara.
Ngwaahịa Anyị Ndị Dị Mkpa:
1.Monoblock Water na Beverage Na-ejuputa Ndenye Ndenye na Mbukota akara zuru ezu
2.Linear Liquid Na-ejuputa Ntanye maka ụlọ ọrụ dị iche iche
3.All iche iche nke igwe nyocha
4. mbukota igwe (maka mmiri mmiri, ntụ ntụ, granule, mado wdg)
5.Bottle na-agba agba igwe
6.Water ọgwụgwọ akụrụngwa
7.Beverage usoro ọgwụgwọ tupu ọnụọgụ
8. Igwe ndị ọzọ